भदौ २१, २०७४ बिहिवार ०४:१०:०० प्रकाशित
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आसन्न निर्वाचनमा डा पुष्पमणि खरालले उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएका खरालसँग उनको उम्मेदवारी र योजनाका विषयमा गरिएको कुराकानी :
मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्षमा तपाईलाई किन मत दिने ?
विगत केही वर्षदेखि नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल चिकित्सक संघको कामलाई नजिकबाट नियालिरहेको छु । काउन्सिलको विकृतीका विषयमा सन् २००४ देखि नै आवाज उठाइरहेको छु । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानमा बाहिर बसेर पनि धेरै सघाएको छु। डा गोविन्द केसीको अभियानदेखि अन्य सबै अभियानमा म निरन्तर लागिरहेको छु । बाहिरबाट भन्दा पनि अब नीति निर्माण गर्ने तहमा गएर सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्यो । त्यही भएर काउन्सिलमा उठ्ने निधो गरेँ। चिकित्सा शिक्षाको सुधार नगरी जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्दैनन् । त्यसकारण काउन्सिलको विकृती रोक्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विकासका लागि मलाई मत दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा केसीले फेरी अनसन बस्न नपरोस भन्ने हामी सबैको चाहना पनि हो ।
काउन्सिलमा गएपछि के गर्नुहुन्छ ?
पछिल्लो समयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल मेडिकल कलेजको सिट बढाउने र घटाउने काममा मात्र बढी केन्द्रित देखिएको छ । काउन्सिलको जुन फराकिलो दायरा थियो, त्यो साँघुरिदै गएको छ। यसकारण पहिला त यसको कार्यक्षेत्र नै फराकिलो बनाउनु पर्नेछ। काउन्सिलले दक्ष चिकित्सक उत्पादनमा जोड दिएर नागरिकको गुणस्तरीय उपचार पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । मेरो काम यतैतिर केन्द्रित हुने छ । यसका लागि मैले एजेन्डा र योजना बनाएको छु । चिकित्सा शिक्षामा ग्राजुयट र पोष्ट ग्राजुयटको अध्यनमा निकै ठूलो खाडल छ । ग्राजुयटमा धेरै उत्पादन तर पोष्ट ग्राजुयटमा निकै कम छ । माग अनुसार सिट छैन । यो खाडल पुर्ने काम अगाडि बढाउने छु । काउन्सिलको व्यवस्थापन सुधार्न विगतमा ऐनले रोकियो भनिँदै आएको छ । काम लिएर काउन्सिलमा पुगेका डाक्टरलाई झ्यालबाट चिहाएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो झ्याल भत्काएर डाक्टरहरु बस्न मिल्ने ‘लन्ज’ बनाउन कुन कानुनले रोकेको छ ? काउन्सिलमा बैंकको काउन्टर खोल्न कुन कानुनले रोक्छ ? काउन्सिलका पदाधिकारीको व्यवहार सुधारर्न कुन कानुनले रोक्छ ? अनलाइनबाट काम अगाडि बढाउन कुन कानुनले रोक्छ ? यी सबै एउटै निर्णयमा गर्नसकिने काम हो। म यी सबै कामलाई व्यवस्थित गर्नेछु ।
काउन्सिलको नेतृत्वमा जान ठूलै पैसाको चलखेल हुन्छ भन्ने आरोप छ नी ?
विगतमा यस्ता हल्ला व्यापक थियो । यो कुरा मैले पनि सुनेको छु । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा कलेजको अनुगमन गर्ने र सिट तलमाथि गर्ने, कागजी प्रक्रिया मिलाएर फाइदा लिने प्रवृत्ति हावी थियो । त्यही भएर काउन्सिलमा आफू अनुसारको पदाधिकारी ल्याउन त्यस्तो चलखेल हुने गथ्र्यो । हालसालै नेसनल कलेजको काण्डले पनि प्रष्ट पारेको छ । योसँगै अन्य विकृतीमा काउन्सिलका पदाधिकारी संलग्न रहेको कुरा बाहिर आएकै हो । यो विकृतीमा सहभागी नभएकाले पनि आवाज उठाउन सकेनन् । ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न सक्थे । त्यो पनि भएन । यसकारण यस्तो प्रवृत्तिलाई जरैदेखि नउखले चिकित्सा शिक्षाको समस्या समाधान हुँदैन।
पदमा पुगेपछि तपाई पनि त्यस्तै हुने त होला ?
त्यस्तो हुँदैन । विगतमा पुराना व्यक्तिहरु गएर जसरी नराम्रा कुराहरु, विकृतीहरु त्यहाँ ल्याए, तिनिहरुलाई फेरी दोहोरीन दियौँ भने समस्या आउला । तर, हामी काम गर्ने मानिस हौँ । हामी प्रणाली सुधारौँ भन्ने सोच भएका हौँ । केही गर्छु भन्ने अठोट बोकेर हिँडेको छु । हामी नयाँसँग धेरैले आश पनि गरेका छन् ।
हामीले सोचे अनुसारको राम्रो टिम बन्न सकेन भने सोच अनुसारको काम नहोला । तर म सबैले राखेको आशलाई निराशामा परिणत हुन दिन्न। काम गर्न सकिएन भने आवाज लुकाएर बस्दिन । आवाज उठाउँछु । सबैकुरा उजागर गर्छु।
तपाईले चोहेको काउन्सिल कस्तो हो ?
काउन्सिल पुरै पारदर्शी हुनुपर्छ । डाक्टरले गुणस्तरीय सेवा दिन ‘हिपोक्र्याट ओथ’ आएका छन् । त्यो ‘ओथ’ अनुसारको काम भएको छ÷छैन भनेर हेर्ने काम काउन्सिलको हो । काउन्सिल राजनीतिबाट पुरै टाढा बस्नुपर्छ । गुणस्तरीय उपचार पाउनु पर्ने बिरामीले त्यो अनुसारको सेवा पाएकी पाएनन् हेर्ने पनि काउन्सिले नै हो । डाक्टरले बिरामीलाई समय दिएको छ कि छैन भन्ने हेर्ने पनि काउन्सिले नै हो । त्यसकारण काउन्सिल विकृती रहित हुनुपर्छ ।